Guddoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe iyo Ciidamo ku baxay deegaanadii colaada ka jirtay ee degmada Cadale – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe iyo Ciidamo ku baxay deegaanadii colaada ka jirtay ee degmada Cadale
Wararka ka imaanaya degmada Cadale ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo Ciidamo ka tirsan Xoogga dalka ayaa gaaray deegaanadii lagu dagaalamayay labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Sida ay sheegayaan wararka Guddoomiyaha iyo Saraakiisha ciidamada hoggaamineysa ayaa ku guuleystay inay kala dhex galaan maleeshiyaadii ku dagaalamayay deegaanada Caddow Uul iyo Koogaar ama Burdheer ee ka tirsan degmada Cadale.
G/sare C/qaadir Nuur Xasan Qoondhe oo hoggaaminayay ciidamada xoogga dalka ee ku baxay deegaanada ay colaada ka jirto ayaa sheegay inay ugu horeyn ku guuleystaan inay kala qaadeen maleeshiyadii dagaalamayay, isla markaana xaalada deegaanka Koogaar ay tahay mid degan.
Dhinaca kale Odayaal dhaqameedyo ka baxay magaalada Muqdisho oo uu hoggaaminayay Nabadoon Maxamed Cabdi Shido ayaa sidoo kale gaaray deegaanada lagu dagaalamay, kuwaasoo wada xal nabadeed.
Wararka ayaa sheegaya in odayaashan gaaray deegaanada lagu dagaalamay ay horu dhac u yihiin wafuud kale oo lagu wado maalmaha soo socda inay gaaraan deegaanka, kuwaasoo isugu jira duubabka dhaqanka labada beelood iyo siyaasiyiin.
Dadaalo nabadeed oo xoog leh ayaa socda, kaasoo la doonayo in xal laga gaaro colaada u dhaxeysa labada beelood ee walaalaha ah, waxaana jiray baaqyo ka soo baxayay Madaxda Hirshabeelle iyo odayaasha dhaqanka oo ku aadan joojinta dhiigga daadanaya.
Dagaalada labadii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacayay deegaano ka tirsan degmada Cadale ayaa waxaa ku dhintay illaa 10 ruux oo dhinacyadii dagaalamayay, dhaawac fara badan, iyadoo la gubay tuulooyin ay kala degaan labada beelood.
Gaari Miineysan oo Ciidamada Amniga gacanta ku dhigeen oo si lama filaan ah u qarxay (Sawirro)
Madaxweyne Farmaajo oo Sacuudiga kala hadlay saldhiga Milateri ee Imaaraadka ka dhisaneyso Berbera